Ibanye na-ege ntị na-ege ntị - Teams, Players, Fans -Wing it now - NAB Gosi News site na Broadcast Beat. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » News » Ibanye na-ege ntị na-ege ntị - Teams, Players, Fans -Wing it now
Ibanye na-ege ntị na-ege ntị - Teams, Players, Fans -Wing it now
"I mara nke ọma na ọ dịtụbeghị mgbe m zutere ụmụ okorobịa ahụ. Ya mere, ị ga-agwa m aha ha, mgbe ahụ m ga-ama onye na-egwu egwuregwu ahụ. "- Bud Costello, "Agụụ na-adịghị mma, "Foto Nile, 1945
Tupu anyị egbutu ụdọ ahụ, anyị na-eche ma eleghị anya, football na golf ga-efunahụ ha (na ndị na-ege ntị) n'ihi na ha anaghị ahụ ya. A sị ka e kwuwe, anyị nwere football ise, ụfọdụ baseball, bọl na NASCAR ọwa, yana sọọsọ golf abụọ anyị buru ibu na ọ bụghị onye ọ bụla bụ n'ezie onye egwuregwu ... ọ dị mma?
Ọ dị mma, Super Bowl (hụrụ mgbasa ozi) na ọdụ ọdụ nke Tiger Woods 'na-alọghachi iji merie ntụrụndụ dị ukwuu mgbe mkpanwụ akwara afọ ise buru ibu ma bụrụ nke ọzọ karịa nke ahụ, ọ bụghị nke ukwuu.
Na IBC, enwere obi ụtọ banyere egwuregwu mgbasa ozi na ịnweta ozi ọma, n'ihi ọganihu ngwa ngwa nke nlele OTT dabeere na IP.
Futbol, ​​football, baseball, basketball nwere mgbe na-ekpo ọkụ n'ebe ndị ọrụ netwọk 'obi n'ihi na anyị ekweta, ọ na-ada na nnukwu ad dollar na karịa karịa ha òkè òkè anya.
Egwuregwu Rehash - Ọ bụ ezie na mkparịta ụka mmiri nke oge a na-eme ka mmiri ghara ịkọ oyi na ụtụtụ ma ọ bụ ụnyaahụ ugbu a ka ukwuu n'ime ya, ọ ka bụ nnukwu oge iji kwurịta banyere asọmpi ahụ ma mee ka arụ ọrụ ahụ dịghachi.
Mgbe ahụ, enwere ndị na-ahụ maka ego na-akwụ ụgwọ (ụgwọ nke ọ bụla) ịgba ọkpọ, ọrụ ịkụ azụ na ịgba mgba.
Ma egwuregwu dị ka ndị na-agba ịnyịnya, ụgbọ ụkwụ, fencing, cricket, lacrosse, skateboarding, drone / hotrod racing, na ọtụtụ egwuregwu niche fọdụrụnụ na-echere onwe ha na YouTube. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ha nwere ọganihu, a ga-etinye ha na ESPN +, Hulu Live ma ọ bụ ụlọ ahịa Amazon.
Ma dịka Allan McLennan si kwuo, onyeisi ndị isi nke PADEM Media Group, ìgwè, egwuregwu, netwọk TV, ndị ọrụ telivishọn na ndị egwuregwu onwe ha na-achọta ụzọ ọhụrụ iji jikọọ ndị na-akwado ụwa gburugburu na OTT.
"Emere ya nke ọma, ntụgharị nke IP na-anọchite anya nhọrọ ọhụrụ dị mkpa maka MVPD site n'inyere ha aka ịnye ihe nkiri vidiyo na ndị na-ege ha ntị," kwuru McLennan. "Ọ na-enye ha ohere ịnweta ohere ịnweta; nke ka mkpa, mmekọrịta nke ndị ahịa dịkwuo nso.
"Ndị na-akwado ihe omume, ndị egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ilekwasị anya n'ichepụta ahụmịhe kachasị mma karịa nke ọma," o mesiri ike. "Ma n'otu oge ahụ, ihe ngwọta ọhụrụ nwere ike ịkwụsị ọrụ na-akwadoghị ire ere ọdịnaya.
"Teknụzụ emeela agadi, a na-etinyekwa ihe ndị ọzọ ugbu a," ọ gara n'ihu. "Egwuregwu egwuregwu gụgharia na IP nwere ike ịba mma karịa, tinyekwuo ya na ọtụtụ ụzọ ọzọ na-etinye aka karịa TVarị gara aga. Igwe ntuli aka nwere akụkọ 50 afọ; na n'ime afọ ole na ole, nnyefe IP na-ebugharị ugbua iji nye ihe ndị na-ekiri chọrọ - nbanye aka na ihe ọ bụla ihuenyo ma ọ bụ ngwaọrụ ha ga-achọ. Isi ihe a ga-ewebata ma na-ebufe ya n'ụzọ ga-amasị ndị fans ka ha ghara ịkọwa ha n'ihi nhọrọ ndị a. "
Site na mmepụta ego na-emepụta ego na-emepụtawanye, enwere mmasị na Egwuregwu na eSports na-eru ndị na-ekiri ha raara onwe ha nye na ndị na-amụbawanyewanye na-ege ntị.
Na n'ihi na onye nke ọ bụla nwere ndị na-ege ntị nke ọma (ọbụlagodi egwuregwu niche), ha nọ n'ọnọdụ iji nye ndị nkwado ọhụrụ aka na n'ọtụtụ ọnọdụ, nkwado (ntụgharị, ego).
Ad Shift - Mgbe ndị ahịa na-agbanwe, otú ahụ ka ndị mgbasa ozi. Na-arịwanye elu, ahịa na-agbanwe ọdịnaya ka ọ dịrị ndị mmadụ na mpempe ntị ha nke na-achọ ọbịbịa ọhụrụ na mmekọrịta mmekọrịta iji jide ndị anya.
Otu akụkọ na-adịbeghị anya Limelight chọpụtara na pasent 60 nke ndị na-ere ihe n'ụwa ga-achọ ikiri (ma kwụọ ụgwọ) ya na egwuregwu n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ha ga-enwe obi ụtọ na ha ga-enwe mmasị na ya na ihuenyo nke nhọrọ ha n'emeghị nlele igbu oge, nkwụsị ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ.
Ihe omumu ihe omumu:
Ndị debanyere aha Cable kwụọ ụgwọ maka ọrụ ndị ọzọ na-asọ asọ karịa ụda ụda. Ihe kariri ọkara (59 percent) kwadoro ma ọ dịkarịa ala otu vidiyo na ọrụ (VOD).
Ndị na-edebanye aha na Cable na-agbakwunye TV na telivishọn na vidio vidio, na-akwụ ụgwọ maka ọrụ 1.2 na-asọba, ebe ndị na-edeghị ndị na-ere USB na-akwụ ụgwọ maka ọrụ 0.7.
Narị Afọ Iri na-eduga ngbanwe zuru ụwa ọnụ gaa na vidio vidio. Afọ 18-35 na-elezi anya ugbu a na-ele ihe ntanetị karịa vidio. Millennials na-eto eto (afọ 18-25) na-ele ihe dị ka elekere itoolu-13 nkeji nke vidio vidio kwa izu, ma e jiri ya tụnyere awa isii, minit 11 nke TV. Onu ogugu 15 nke puku otu puku mmadu na-emefu ihe kariri 20 awa n'izu na-ekiri vidio vidio.
Ndị ọrụ ga-akwapu ọrụ ha n'ihi ọnụahịa na-abawanye. Ihe kariri ọkara (55 percent) nke ndị na-ere ihe n'ụwa dum na-ekwu na ọnụ ọgụgụ ego bụ isi ihe kpatara ịkagbu ọrụ SVOD. Ihe fọrọ nke nta ka ọkara ọkara (46 percent) na-edekwa otu ihe ahụ maka ntinye aha ha.
Ịntanetị na-elele anya n'ọtụtụ ebe site na mba. Ndị na-ekiri na Philippines na-ekiri vidio kachasị n'ịntanetị na awa asatọ, minit 46 kwa izu, soro India na United States nso site na elekere asatọ na ọkara elele anya kwa izu. Germany nwere ọnụ ọgụgụ ntaneti vidio kachasị elu na awa ise, nkeji abụọ.
Dị ka McLennan si kwuo, ibi ndụ na mmekọrịta mmekọrịta (ngwaọrụ dị iche iche) bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị na-eto ngwa ngwa na mgbasa ozi egwu.
N'ihi nnweta dị njikere nke CDN (netwọk nnyefe ọdịnaya) na n'ihi na Ịntanetị na Wi-Fi bụ ebe nile, ọtụtụ ìgwè egwuregwu ọhụrụ na-atụle ịmepụta ọwa nke ha maka ihe omume, anya nke akụkọ ihe mere eme na nlezianya na ihe ngosi / òkè na onye ederede siri ike nke ọdịnaya.
OTT Bandwit - Iji gbochie ọchịchọ na-agbanwe agbanwe nke ndị na-azụ ahịa site na TV oge a na-elegharị OTT, ATSC na SMPTE mepụtara ọkọlọtọ ọhụrụ nke ga-ewepụta ọdịnaya vidiyo n'ụzọ dị irè karị ma rụọ ọrụ DTC karị. Iji jide ọtụtụ ndị na-ekiri ndị na-elegharị anya na mobile, telcos mepụtara 5G nke ga-enye mma ịrụ ọrụ bandwit maka ịlele na atụmatụ ndị ọrụ na Wi-Fi.
HD, UHD, 4K / HDR vidiyo na egwuregwu na-agabiga kwa ụbọchị site na nsonaazụ dị mma.
Ke adianade do, McLennan, kiet ke otu akpa owo ke OTT ye utom mme n̄kpọ emi ẹdọhọde, "SMPTE(Society of Motion Picture & Television Engineers) emeela ezigbo ọrụ nke ịmepụta ATSC (Advanced Television Systems Committee) nke 3.0 nke kachasị mma maka mgbasa ozi n'ikuku ma na-eme ka ikiri ọtụtụ nde mmadụ na mberede.
"Ndị na-emepụta 5G emewokwa ezigbo ọrụ nke ịmebi ụkpụrụ ha kwa," ọ gbakwụnyere. "Ọnụ, ha nwere ike inye ndị nwe ụlọ na ndị na-ere ha nlele ha chọrọ, karịsịa egwuregwu ha.
Na 2018 Mobile World Congress (MWC), telcos kwuru na nso nso a na ha ga-enwe 5G teknụzụ arụnyere na 50 ahịa. N'ezie, Verizon mepee ahịa anọ na ọnwa gara aga na Ericsson amụma na 10 + pasent nke ahịa ụwa nwere ike ịbụ 5 nyere 2020G.
"Ha abụọ ga-enye usoro ikpo okwu siri ike maka mgbanye ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ," kwuru McLennan.
"Sinclair, Pearl na ọtụtụ ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa esetịpụwo ọrụ ATSC na-arụpụta nnukwu ihe, a na-etinyekwa ihe ndị ọzọ maka mgbapụta n'afọ a na nke ọzọ." o kwuru
Njem ọkụ ọkụ - N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụwa nwere ike ịntanetị na netwọk netwọk na-agbasa ma na-emewanyewanye, ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnweta ntụrụndụ miri emi, ntụrụndụ dị ukwuu, akụkọ na egwuregwu n'emeghị ka ịnya ụgbọelu ọnwụ.
Oge a na-atụghị anya, igwe egwu na-atụ ụjọ, ụda olu na arụ ọrụ, ntinye nke 1-5 na-abata na ihuenyo nke onye ọzọ tupu ị hụ na ọ bụ akụkụ nke nnukwu nsogbu ịma aka na-agba ọsọ na vidiyo - ịgbachi.
N'ịda ụda ala ahụ, ka onye ahụ na-ahụ ihe na-ahụ anya, otú ahụ ka ndị ahịa na-enwekwu afọ ojuju nakwa na ọ gafeghi ka onye na-anụ egwuregwu ga-akwụsị ma ọ bụ gbanwee ọrụ.
Ihe niile CDNs na ngwaike / ngwanrọ na-elekwasị anya na-agbalị ịnweta ọkpụkpụ dị ala (nso efu efu) nke njedebe nke HD, UHD na 4K / HDR ọdịnaya.
Ha na-eme ya mgbe niile ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya ... na nkà na ụzụ ọhụrụ, ọ ga-aka mma!
Mmezi Codec - E meela ọtụtụ nkwalite iji meghee ihe ọmụma na kọmputa na-ewepụta ihe na kọmputa na ya iji mee ka OTA kesaa video dị elu gụnyere ihe omume egwuregwu 4K / HDR tinyere bandwit maka arụmọrụ ọzọ, nlele na mkparịta ụka.
Ihe ngwọta nke nchịkwa nke nchịkwa, karịsịa ngwọta dị ka V-Nova nakwa Bitmovin, ATME na ndị ọzọ, na-eji ugbu a iji kwado ụdị egwuregwu vidiyo dị ka HD, Ultra HD 4K, na 360 VR.
Ha na-akwado HLS (HTTP Live gụgharia), HEVC (Nhazi Igwe Ngosipụta Ọma) na MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP).
E meela ka ha niile nwee ọganihu dị iche iche nke HDD pixels (tụkwasị anyị obi, ọ pụtara igbu egbugbu na ihuenyo ọ bụla).
Ihe mgbaru ọsọ - wepụta ahụmahụ mgbasa ozi na ngwaọrụ niile a na-enye IP ma kpoo ọkwa dị omimi nke nkwekọrịta nke ndị ahịa. Ngwọta ndị dịka Net Insight's Sye na - eme ka ọ dịkwuo mfe inwe ihe omume cross-device - ihe omume na nnukwu ihuenyo, nso-elu / ndabere na 2nd nyocha na texting / tweeting na 3rd ihuenyo n'otu oge ahụ.
Ntughari - Ọ bụ ezie na "egwuregwu nnukwu" nwere ike ka na-elele na ntanetị TV, ndị na-ekiri ihe na-ejizi ntanye ndị ọzọ iji gbanwee ozi / ozi banyere ihe ahụ ma na-ele anya dị iche iche na njedebe nke ndị sonyere. Enwere ihe bara uru na - eme ka onye na - azụrụ aha ego na otu onye ahụ bara uru.
Woody Woodhall, onyeisi oche nke Allied Post, kpofuru m n'ime afọ ole na ole gara aga na ụda egwu nke ihe nkiri bụ ihe kachasị mkpa, ma mee ka ihe nkiri dị egwu nke nnukwu fim.
O nwere ike ịbụ na ọ dị mkpa karịa ndị chọrọ n'ezie ka emikpuo ha n'ememe egwuregwu ha.
Nabata ya, akụkụ kasị mma nke egwuregwu ahụ bụ ọdịda ma ọ bụ na ọ na-enwe mmetụta nke kụrụ a linebacker, swish nke futbol n'ime ụgbụ, ụdọ nke raket megide tennis tenis, njikọ nke abụọ NASCAR ugbo ala ma ọ bụ okwu mkparịta ụka nke LeBron na Draymond.
Enweghị ụda, egwuregwu ahụ ga - abụ ihe na - agwụ ike!
Ma ọ bụ Dolby Atmos ma ọ bụ na ọnụọgụgụ koodu, ọ bụ HD, UHD, 3D ma ọ bụ ụda immersive nke na-eme ka ị "na egwuregwu."
Akụkụ Dị Mfe nke Egwuregwu
Piracy - Enweghị ikike, nkesa na-ezighị ezi nke ihe egwuregwu na ihe omume na-efu ọnụahịa egwuregwu, ihe omume na ìgwè dịka $ 9B kwa afọ. Na mgbakwunye, ebe ndị pirate na-enye ndị na-ekiri ha agbakwunyere njirimara dịka malware na ịzu ohi.
Mpaghara kachasị njọ nke egwu egwu (na ọdịnaya vidio) bụ ire ere.
Ogwe iko nke bọl na Russia nwere 2,637 pirate iyi maka semifinals na Facebook, YouTube, Twitch, na Periscope. Enwere ihe ngosi 30M na 3,653 iyi nke France-Croatia ikpeazụ na ihe ngosi 60M.
"Ntugharị" ahụ (mgbazigharị na-efu) na-efu FIFA na ndị ji ikike iwu kwadoro ikike nde mmadụ!
Ee, ndị nwe ikike nwere ike ịchọta kpọmkwem ndị ahụ na-emejọ ruru adreesị IP, ma iwu chọrọ ka ndị nwe nwe ikike nwefee iziputa na ebe nrụọrụ weebụ, na-agwa ha ka ha wepụ vidiyo ndị na-emejọ.
N'ụzọ dị mma, e nwere ngwá ọrụ dịka ndị NAGRA webatara nke nwere nchekwa nchebe siri ike ma nwee ike ichebe ndị na-ekiri egwuregwu na ndị nwe ọdịnaya tupu a achọọ ịgba akwụkwọ.
"Onu ogugu ndi mmadu n'eme egwuregwu nwere ike iche banyere onu ogugu ndi mmadu na-emeghi," McLennan kwuru, sị, "Ma nke a ezighi ezi n'ọtụtụ ọkwa.
Izu - Ebe ndị na-emepụta pịakọtara na-enye ego dị ala ma ọ bụ "nnwere onwe" nke ihe omume egwuregwu site na Cup World Cup, US Open, Super Bowl, Rose Bowl na ọbụna ụlọ akwụkwọ sekọndrị; enweghi ike na ikwenye ekwenye karia ndi nwe ha, ndi na akwado ya choro izoputa.
"Ihe ndị mmadụ na-adịghị aghọta bụ na ha nọ n'ọnọdụ dị egwu ọbụna karị site n'ịnọ ụtọ na egwuregwu egwu egwu," McLennan mesiri ike. "Osimiri ndị na-akwadoghị gụnyere" atụmatụ ndị ọzọ "dịka malware, mgbasa ozi cybertheft na mmemme ndị omempụ ndị ọzọ nwere ike ime ka ihe omume egwuregwu dị ọnụ ala dị oke ọnụ."
Nweta igwe bandwit na teknụzụ zuru ụwa ọnụ na-enye ohere nnyefe ngwa ngwa nke ọdịnaya dị elu dị ka egwuregwu ndị a pụrụ ile anya na ihuenyo ọ bụla n'oge oge ma ọ bụ mgbe ọ dịịrị onye na-anụ ọkụ n'obi mma.
N'ikpeazụ, ndị na-akwado egwuregwu, ndị na-akwado na ndị na-eme egwuregwu nwere ihe ngwọta na ngwọta dịịrị ha iji zipu ọrụ na mpaghara, mpaghara, mba na mpaghara na ihe omume na ahịa ọnụahịa.
Anyị ahụworị na ndị na-egwu egwuregwu bụ ndị na-esite n'oge na-esite na ndị na-ekiri ihe nkiri na ndị na-ekiri ihe nkiri.
Na omimi, enwekwuwanye ihe omuma ihe omimi nke ndi mmadu.
Egwuregwu ndị na-asọ asọ, isi na niche egwuregwu na-enwewanye ohere ịmepụta ụda olu dị iche iche ma bụrụ ndị na-ege ntị na ndị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ ndị na-ahụ egwu.
Site na OTT nke dijitalụ, ndị na-ekiri nwere ike ịnweta ya karia na ọdịnaya dị elu nke na-ejedebe site n'echiche nke obodo-ọ bụrụhaala na ha emeghị ya mgbagwoju anya.
Mgbe ahụ, onye ọ bụla na-enweta!
Ọ dịghị onye chọrọ ka ndị na-ekiri ihe nkiri na-emeghachi omume na ha dịka Lou mere Bud, "Otu gị! Dị ka unu! M na-atụba onye na-agba bọl. Onye ọ bụla nke na-akụda bọl ahụ na onye ahụ na-agba ọsọ gaa nke abụọ. Ònye na-eburu bọl ma tụba ya na Gịnị. Gịnị na-atụba ya na m amaghị. Amaghị m na ị na-atụba ya n'echi, Egwuregwu atọ. Nwa nwoke ọzọ na-ebili wee kụọ bọl na-agba ọsọ n'ihi na. Ntak-a? Amaghị m! Ọ bụ onye nke atọ, anaghị m enye darn! "
president at Marken Communications
Andy bụ Onye Nwe na President of Marken Communications Inc. a Marketing na Communications ndụmọdụ, emi odude ke San Francisco ebe ke August 1977 ka Present.Marken Communications bụ onye na-eje ozi gị n'ụlọnga na ụtụtụ na-azụ ahịa / ahịa atụmatụ, n'ọnọdu, mmepe, na nkwukọrịta . The 30 afọ gị n'ụlọnga e abuana na a sara mbara elu ugwu nke ụlọọrụ na ahia-eme. Ahụmahụ na-agụnye usoro na ahịa atụmatụ na-egbu na nkwukọrịta na Internet sịrị tinyere AT & T na CERFnet nakwa nchekwa, nchekwa management na video ngwọta na sịrị tinyere Philips, InterVideo, Ulead, OWC, NewerTech, Sonic, Corel, Matsushita, n'ọtụtụ kasị elu, dazzle , Cyberlink, Mountain Computer, Nikon, Plasmon, NTI, mgbasa ozi Tech, verbatim, Mitsubishi na Panasonic.
Ọhụrụ posts site Andy Marken (-ahụ ihe niile)
Ibanye na-ege ntị na-ege ntị - Teams, Players, Fans -Wing it now - November 7, 2018
Ịha nhata, dị ka nnukwu ihe nkiri, chọrọ ichere niile nkọwa - October 31, 2018
M & E Evolution Na-enyere Nlekọta Ọrụ Ihe Omume Anya - October 17, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Onyinye isovideo, viarte, HDR, mkpọtụ Mbelata, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate Mbelata, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 Ụgha & Akụrụ nsụgharị, Digital Nirvana, nyochaa mgbasa ozi, IBC TV Technology Ultra HD Forum video Engineer virtual eziokwu	2018-11-07
Previous: NDỤMỌDỤ NDỊ MMADỤ FREESPEAK II GỤKWUO COMMS NKWUKWU NDỊ KWESỊRỊ ỤLỌ NCHE 'ỤWA'
Osote: Ihe nkiri na-eme ka ndị Japan nwee ike ịmepụta ihe na Inter BEE 2018
Archives Họrọ net November 2018 (223) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) Ka 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) Ka 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) Ka 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) Ka 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) Ka 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) Ka 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
NAB na CTA ka ha gwa Adreesị Data Rịịlị na Metadata Standards
Mata Raddatz akwadora maka 2018 NAB Gosi New York
NAB Nkwupụta na House Passage nke Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music emeziwanye Act
2018 Radio Gosi na Gụgharia Gụgharia Họrọ Sessions
Robert De Niro na Na-emepụta 2018 NAB Gosi New York
Hey Buddy !, Achọtara m ozi a maka gị: "Na-arụ ọrụ na-ege ntị na-ege ntị - Ngalaba, Egwuregwu, Fans -Nke ya ugbu a". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/engaging-live-audience-teams-players-fans-want-it-now/. Daalụ.